‘रअ’का प्रमुखले पूर्व राजालाई भेटेको समाचार प्रति आपत्ती - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
‘रअ’का प्रमुखले पूर्व राजालाई भेटेको समाचार प्रति आपत्ती
काठमाडौं । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख समान्त गोयलले भेटघाट गरेको भन्ने समाचार प्रति पूर्वराजाका सचिव डा. फणिन्द्रराज पाठकले आपत्ती जनाएका छन ।
रअ प्रमुख गोयलले पूर्वराजालाई भेटेको समाचार प्रति पूर्व राजाका स्वकीय सचिव डा. फणिराज पाठकले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै समाचार प्रति आपत्ती जनाएका छन । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘पूर्व श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट मध्यरातमा भारतीय गुप्तचर संस्था ’रअ’का प्रमुखलाई भेटेको भन्ने केही अनलाइन पत्रिकामा छापिएका खबर पूर्णतया झूठो भएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
‘रअ’ प्रमुख गोयल नेपाल आएसँगै अहिले उनको आगमनले नेपाली राजनीतिमा निकै तरंग उत्पन्न गरेको छ । सरकारलाई विना जानकारी एकाएक नेपाल आएका गोयलको आन्तरिक उद्धेश्य के थियो भन्ने बारे निकै टिकाटिप्पणाी हुन थालेका छन । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटघाट गरिएको समाचारको खण्डन गर्दै विहिबार सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले त्यसको खण्डन गरे ।
‘भारतीय गुप्तचर प्रमुख आएको हामीलाई थाहा छैन,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘आएको, भेटेको हो भने पनि कूटनीतिक प्रचलन अनुसारै हुन्छ।
समाचार माध्यमले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत भेटेको समाचारहरु आएका थिए।